Apple inosimbisa zviri pamutemo zuva reinotevera WWDC 2016 | IPhone nhau
Apple inosimbisa zviri pamutemo zuva reinotevera WWDC 2016
Munguva pfupi yapfuura, Apple ine nzira yekuziva yekuita zvimwe zviziviso. Haisi nguva yekutanga iyo kambani inoshandisa Siri kuita chiziviso nezvemazuva ehurukuro. Nezuro masikati, nguva yeSpanish, Siri akatanga kupa zvemukati ruzivo, Ruzivo rwanga rwakanangana nezuva iro Apple ichaita misangano yekuvandudza iyo inobata gore rega rega mukati memwedzi waJune.
Sekureva kwaSiri mushure mekubvunza, inotevera hurukuro ichaitwa munaJune 13-17 paBill Graham Auditorium muSan Francisco. Kubva kuActualidad iPhone isu tichapa nhoroondo yakanaka yezvose zvinoitika mumusangano wekutanga uko avo vanobva kuCupertino vachapa zvese nhau dzeatsva masystem anoshanda ayo anosvika kumusika mukati memwedzi waGunyana.
Maawa mushure mekudonha kweSiri, Apple yakasimbisa zviri pamutemo misi yeWorld Wide Developers Conference, ichaitika pakati paJune 13 na17 muSan Francisco, sezvakambotaurwa nemubatsiri wega weIOS (uye nekukurumidza pamwe OS X / macOS) Siri.
Ndiine mana ekuvhuvhuta mashandiro masystem uye nemutauro mutsva wechirongwa uyo wakagamuchirwa neanopfuura mabhirioni emidziyo kutenderera pasirese, ini handina kumbobvira ndanyanya kudada nenzvimbo yedu yekuvandudza. WWDC 2016 ichave nzvimbo yekutanga kune vanogadzira vari kuronga mu Swift uye kuvaka zvishandiso uye zvigadzirwa zveIOS, OS X, watchOS, uye tvOS.
Takamirira iwe uchinetsekana, muSan Francisco kana kuburikidza nhepfenyuro mhenyu.
Kana mharidzo yapera kuimba yeBill Graham muSan Francisco, zvikamu zvinoshanda nemainjiniya eApple zvichaenda kuMoscone West, uko Apple inowanzo bata nevanogadzira kuitira kuti vagone kugadzirisa chero mibvunzo ine chekuita ne iwo matsva mabasa ayo kambani ichaunza mune yegumi vhezheni yeIOS iyo inosvika kune vese vashandisi mumwedzi waGunyana mune yayo yekupedzisira vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inosimbisa zviri pamutemo zuva reinotevera WWDC 2016
Yousician, iko kunyorera pane yangu iPhone iyo iri kundidzidzisa kuridza piyano (uye mune ramangwana gitare uye ukulele)